भुक्तान गरिएको खोज अप्टिमाइजेसन: यात्रा र पर्यटन उदाहरण Martech Zone
भुक्तान गरिएको खोज अप्टिमाइजेसन: यात्रा र पर्यटन उदाहरण
शुक्रबार, अगस्त 28, 2015 Douglas Karr
यदि तपाईं सहायता खोज्दै हुनुहुन्छ वा भुक्तान गरिएको खोज विशेषज्ञता, त्यहाँ एक उत्तम स्रोत छ पीपीसी हीरो, एक उत्कृष्ट प्रकाशन जहाँ हानापिन मार्केटिंगले उनीहरूको विशेषज्ञता साझा गर्दछ। हानापिनले हालसालै यो शानदार इन्फोग्राफिक, जारी गर्‍यो यात्रा र पर्यटन बजारका लागि शीर्ष दश पीपीसी सल्लाहहरू। जबकि प्रयोग केस यात्रा र पर्यटन हो, यी सुझावहरू उनीहरूको पीपीसी (प्रति क्लिक भुक्तानी) रणनीतिहरूमा भुक्तान खोज अनुकूलन विधि समावेश गर्न खोज्ने कुनै पनि मार्केटिंगको लागि आदर्श हो।
% 65% फुर्सद यात्रीहरू र%%% व्यापार यात्रीहरूले भने कि तिनीहरू वेबमा कसरी जान्छन् वा कहाँ यात्रा गर्न चाहन्छन् भन्ने निर्णय गर्न, हानापिन मार्केटिंगले सोचे कि व्यावहारिक सल्लाहको साथ एक सुन्दर इन्फोग्राफिक एक राम्रो स्रोत र सबै यात्रा र पर्यटनको लागि मार्गनिर्देशन हुनेछ। बजार
यहाँ शीर्ष भुक्तान गरिएको खोज अनुकूलन सुझावहरू छन्
आफूलाई फरक पार्नुहोस् - केहि अनुसन्धान गर्नुहोस् प्रतियोगीहरु पीपीसी अभियानहरु र तपाइँको विज्ञापन अभियान फरक।
विभिन्न अभियानहरू - तपाईंको दर्शकहरूले के खोजिरहेका हुन सक्छन्? तपाइँको प्रस्तावहरूको परीक्षण गर्न र भिन्नताको लागि धेरै अभियानहरू प्रदान गर्नुहोस्।
भू-लक्ष्य - स्थानहरू लागू गर्न ती क्षेत्रहरूमा तोक्नुहोस्, अन्यथा तपाईं तपाईंको भुक्तान गरिएको खोज मार्केटिंग बजेट खेर फालिरहनु भएको छ।
दिन र घण्टा द्वारा लक्षित - सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको प्रस्तावहरू दृश्यात्मक हुनेछ जब सम्भावनाहरूको लागि हेर्ने हो भने क्लिक-टु-रूपान्तरण दरहरूमा नाटकीय वृद्धि हुन सक्छ।
ROI को लागि अप्टिमाइज गर्नुहोस् - उत्कृष्ट ट्राफिक प्राप्त गर्नु राम्रो हुन सक्छ तर यसले बिलहरू भुक्तान गर्दैन। ट्राफिक मात्र होईन, राजस्व ड्राइभि are गर्दै अभियानहरूमा विश्लेषण र फोकस गर्नुहोस्।
बिडिंग रणनीतिहरू - तपाइँको अभियान उद्देश्यमा आधारित बिडिंग रणनीतिहरू सिर्जना गर्नुहोस्। जागरूकता, साझेदारी, यातायात र रूपान्तरण सबै कुञ्जी हुन्, तर रूपान्तरणको लागि अधिक खर्च गर्दा धेरै उच्च बोलपत्रहरूको साथ ट्राफिक खरीद गर्नु भन्दा बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
प्रदर्शन अभियान अप्टिमाइज गर्नुहोस् - विज्ञापन प्लेसमेन्टहरू निरीक्षण गर्नुहोस् र भ्यपोर्टको लागि अनुकूलित गर्नुहोस् एक-साइज प्रयोगको सट्टा सबै रणनीति फिट हुन्छ।
बजारीकरण - प्रत्येक पीपीसी रणनीति एक मार्केटिंग रणनीति हुनु पर्छ! तपाईंको साइटमा र बायाँ भएका आगन्तुकहरूलाई लक्षित गर्दै बिल्कुलै रूपान्तरण दरहरू वृद्धि गर्नुहोस्.
बिंग प्रयोग गर्नुहोस् - trave%% व्यापार यात्री वेब को लागी यात्रा को लागी व्यवस्था को लागी र बिंग मा ट्राफिक को %१% बिंग को लागी (Google मा छैन)।
ल्यान्डि Pages पृष्ठहरू अनुकूलन गर्नुहोस् - महान ल्यान्डिंग पृष्ठहरूले मात्र रूपान्तरणहरू बढाउँदैन, यसले उत्कृष्ट गुणवत्ता स्कोरहरू पनि ल्याउँदछ जुन तपाईंको विज्ञापन स्थान सुधार गर्दछ। तपाईंको अवतरण पृष्ठहरू अनुकूलन गर्नुहोस्!
टैग: hanapin मार्केटिंगभुक्तान गरिएको खोजीभुक्तान गरिएको खोज मार्केटिंगप्रति क्लिक भुक्तानी गर्नुहोस्payperclickपीपीसीppc मार्केटिंगppcheroखोज इञ्जिन मार्केटिंगपर्यटनयात्रा
लीडसिफ्ट: सोशल मीडियाको साथ क्याप्चर इनटेन्ट र एक्शनएबल इनसाइट्स